Madaxweyne Xassan Sheikh oo ka qeybgali doona Shir ka dhacaya Magaaladda Washintong – idalenews.com
Madaxweyne Xassan Sheikh oo ka qeybgali doona Shir ka dhacaya Magaaladda Washintong
Iyadoo la filaayo dhawaan in Magaaladda Washintong ee Cariga Dalka Maraykanka uu ka furmo Shir looga hadlayo Arrimaha Somalia ayaa waxaa ka qeybgali doono Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somalia Md. Xassan Sheikh Maxamuud.
Dona Hobcins oo ah Haweeneyda Agaasimaha guud ka ah Kooxda Xiriirka Caalamiga, ayaa waxa ay Warbaahinta u sheegtay in Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somalia Xasan Sheikh Maxamuud uu dhawaan socdaal ku imaan doono Magaaladda Washintong si uu uga qeybgalo shir looga hadlayo xaalada dalka Soomaaliya uu iminka ku talaabay iyo Caqabadaha hortaagan Dowladda Somalia.
Dona Hobcins xilli ay la hadleysay Saxaafadda waxa ay sheegtay in Shirkaasi uu ahaan doono mid diirada lagu saaro sidii Somalia loo taageeri lahaa isla markaana ay ku soo bandhigi doonaan Muuqaal laga diyaariyay Marxaladda Somalia.
Dhanka kale, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Ismail Omar Gele, ayaa waxaa isaguna lagu wadaa inuu u ambabaxo Magaaladda London ee Cariga Dalka Ingriiska, waxaana lagu soo waramaaya inuu ka qeybqaadan doono Shirka Soomaalida ee ka dhici doono Magaaladda London.
Si kastaba ha ahaatee, Dowladda Maraykanka iyo Britain ayaa Rajo wanaagsan ka muujiyay Shirka la filaayo inuu ka dhaco May Magaaladda London kaasoo looga hadli doono Arrimaha Somalia, iyadoona Britain ay sheegtay in Shirkaasi uu u furan yahay Dowladaha Saaxiibada la ah Somalia oo u arko inay Shirkaasi waxbadan kusoo kordhin doonaan.
Soomaali sharci-darro ku joogtay Kenya oo la soo masaafurinayo
Raa’isal Wasaare Itoobiya oo hadalo aan looga baran ku weeraray Saraakiisha Amisom, kuna goodiyay inay Ciidankooda ka soo saarayaan Somaliya